admin January 7, 2019 January 7, 2019 No Comments on DASTUURKA SOMALILAND PDF
Dastuurka Somaliland (Af-Ingiriis: Constitution of Somaliland; Af-Carabi: أرض الصومال دستور) waa dastuurka dowliga ah ee Jamhuuriyada Somaliland kaasi oo . Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Markuu arkay: Markuu arkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka. Jamhuuriyadda Somaliland. Qodobka aad ee . Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Markuu arkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Markuu arkay: Qodobka aad ee.
Author: Banris Tygokora
Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa jidaynaya go’aan Golaha Wakulada. Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Reebbanaanta Qabashada Xil Kale.
Guddida Culimadu waxay ka kooban yihiin kow iyo toban 11 dwstuurka muddada xilkuna waa shan sanno 5 ; xubintii mutaysatana dib baa loo soo magacaabi karaa.
Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliif ah waxa loo eegayaa danta daztuurka maslaxadda bulshada. Waxaa reebban urur kasta oo leh ujeeddooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama Ieh qaab cudan ama hubaysan amaba kuwa kale ee khilaafsan xeerka weji kasta ha lahaadeene.
Xukuumaddu waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Ka-talo-bixinta dhalliilaha maamul ee Xukuumadda iyo ogaysiintooda Golaha Wakiilada. Dawladdu waxay ku dadaalaysaa in ay ka dhex abuurto shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha is-afgarad iyo xaqsoorid iyada oo sidaas xeer ku soo saaraysa.
Dawladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta, caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaanay xoojinaysaa hay’adaha ku shaqada leh. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa. Jamhuuriyadda Somaliland waxay dib u celin kartaa dambule ama eedaysane dalkiisa ka soo cararay, haddii uu jiro heshiis dhex maray Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka weydiistay celintiisa.
Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada, waxayna tirtiraysaa caadooyinka wax u dhimaya Diinta, horumarka, dhaqanka iyo caafimaadka bulshada.
Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha. Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada xilkeeda. Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda.
Heesta Qaranku waa mid muujinaysa bartilmaameedyada Dastuurka, caqiidada ummadda, hab-dhaqmeedka wadatashi; waxanay yeelanaysaa miyuusik u gaar ah oo ka duwan dasturka dalalka kale; waxaana lagu soo saarayaa xeer. Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday. Dawladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayo-qabka deegaanka oo asaas u ah caafimaadka bulshadda iyo dhawrista khayraadka dalka. Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon doonaa garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority.
Si loo xaqiijiyo kobcinta wax-soo-saarka, kor-u-qaadidda heerka nolosha, abuuridda goobo shaqo, iyo guud ahaan horumarinta dhaqaalaha dalka, Dawladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee dhaqaalaha, oo ku salaysan mabaadi’da suuqa xorta ah iyo is-garabsiga hantida gaar ahaaneed; hantid wadareed, hantida Qaranka iyo maalgelinta shisheeyaha. Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada osmaliland 2.
DaIka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo; gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaa degmooyin. Himilooyinka xilgudashada Baarlamaanka waxa ugu muhiimsan arrimahan soo socda: Dhismaha gobollada iyo degmooyinka, xuduudohooda iyo darajooyinkooda xeer baa tilmaamaya. Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko.
Xabsigu waa edbin iyo toosin. Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha.
Qofna lama fara-gelin karo qoraalladiisa gaarka ah, waraaqihiisa boosta ama xidhiidhkiisa isgaadhsiineed, marka laga reebo xaaladda uu xeerku baneeyo baadhitaankooda, daba-galkooda, ama dhegaysigooda iyada oo ay markaana waajib tahay in la helo amar garsoore dqstuurka sababaysan. Wasiirka ama Wasiir-ku-xigeenka istiqaalad dhiiba ama xilka laga fadhiisiiyo isaga ayaa xilka sii haynaya inta beddelkiisu ka tirsanayo. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Dawtuurka.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu iska difaaco maxkamadda horteeda.
Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda. Haddii Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mad axweynaha lagu oogo dembiyada kala ah: Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara dastkurka.
Awoodda iyo karaamada Qaranka.
Ansixinta magacaabidda Guddoomiyaha Maxkamadda Sare. Constitution of Somaliland ; Af-Carabi: Its version dib-u-soo daabacay ka kooban Hordhaca ah Arar iyo shan cutubyada ugu weyn Qaybo kuwaasoo mid walba uu yahay sub-qaybsan Qaybo Xubno.
Haddii aanay Golayaashu fadhiyin waxa Gudoomiyayaashoodu isugu yeedhayaan Golayaasha fadhi aan caadi ahayn muddo 14 maalmood gudahood ah.
Tirada Xubnaha Golaha Wakiilada ee xeer-hoosaadka Goluhu qeexo. Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Ciidanka Booliisku waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada iyo dhaqan-gelinta xeerarka; qaab-dhismeedkoooda iyo waajibaadkoodana xeer ayaa qeexaya.